END016 - I-OMG Wifi Borescope Endoscope Camera Lens 3.9MM - Izixazululo ze-OMG
END016 - Ilensi yekhamera ye-OMG Wifi Borescope Endoscope 3.9MM
Ukuxhumeka kwe-WiFi (3 koku-1 - Ukusekela izinhlobo ze-Android ne-IOS): Ngokungafani nenye ikhamera ye-endoscope emakethe, le khamera engenantambo ye-wifi endoscope ayisebenzi nje kuphela nge-smartphone ye-Android (Above Android 2.3), kodwa futhi nohlelo lwe-iPhone IOS (Above IOS 6.0). Ilungele umsebenzisi we-iPhone ofuna ukwenza umsebenzi wokuhlola. Ngaphandle kokusebenzisa i-adaptha noma ikhebula elengeziwe, ingaxhuma kalula nge-smartphone yakho nge-WIFI. Ukuphela kwento okudingeka uyenze ukulanda nokufaka i-APP ehambisanayo "isithombe se-WIFI" kudivayisi yakho.
Amabhethri we-2000mAh: Isikhathi Eside Esisebenzayo: i-lager engaphezu kwe-800 mAh umthamo, i-jingleszcn endoscope ingasebenza kuze kufike emahoreni ama-5 ngemuva kokushaja ngokugcwele, ngokungafani naleyo khamera esebenza nje imizuzu embalwa.
IKHABHODI YOKULIMA KWAMANZI: Uhlome ngekhebula le-Flexible elingalawula ukuqondiswa kwekhamera yokuhlola kalula, ligobe futhi ligcine isimo salo ukufinyelela ezikhaleni ezivalekile. Kuhlanganiswe nesici sokungena manzi se-IP67, ingasetshenziswa kabanzi ukuhlola ipayipi, indle, umsele odongeni, imbobo, ikhebula le-chute elikukhathaze ngaphambili.
Kusetshenziswe kalula: Skena ikhodi ye-QR kumanuwali ukulanda isithombe se-Wifi, Xhuma idivayisi yakho ehlakaniphile nge-WIFI, Vula i-APP bese ividiyo ebukhoma izovela esikrinini. NGICELA UNGAYISETHI IBHODLA LENKOSI WIFI NGOKWAKHO, NGOKUNYE NOKUTHI I-ENDOSCOPE IZOKUSETSHENZISWA.
Ikhamera Yokuxazulula Okuphezulu: Ifaka nekhamera eyi-1 Megapixels HD, enezinqumo ezintathu eziguquguqukayo 320 × 240, 640 × 480, 1280 x 720.
AIzinsimbi ezincane: Le yi-lens ye-3.9mm, Ngokungafani ne-5.5mm, i-8mm, lokhu kungasebenzisa kububanzi obuncane Ukuhlola I-Drain Plumbing Wall ne-Injini.